Maxaa La Gudboon Soomaalida Itoobiya?
Sabti, August, 11, 2018
Jawaabta su'aashani may ka maarmayso dib-u-milicsi taariikheed oo kooban. Christopher Clapham, oo bare-sare ka ahaa Jaamacadda Cambridge, wuxuu isbeddelkii ka dhacay Itoobiya 1991kii ku tilmaamay soo afjaristii taladii siyaasadeed oo ka soo jeedday Shewa qarnigii 19aad kaddib markii Menelik uu noqday embaradoorkii Itoobiya sanadkii 1889kii. Dhaqdhaqaaqa ururka isbeddelkii dhacay 1991kii udub-dhexaadka u ahaa waxaa loo yaqaannaa Wayaane; wuxuu ka soo jeedaa gobolka Tigray. Tigray iyo Shewa may aha oo keliya magacyo goboleed: sida magaca Finfine qofka u xusuusiyo qowmiyadda Oromada , Shewa iyo Tigray waxay qofka kala xusuusiyaan qowmiyadaha Amxaarada iyo Tigre.
Ra'iisal Wasaare Abiy Axmed: Summadda awoodda siyaasadeed ee Oromada
Oromadu kaalin mug leh bay ku lahayd ridistii taliskii Dergiga. Jabahadda Xoreynta Oromo ( Oromo Liberation Front) wuxuu ka mid ahaa isbahaysiga EPRDF hase ahaatee cudud siyaasadeed bay EPRDF adeegsatay si ay OLF uga reebto in ururka Oromadu uu kaalin ka qaato kalaguurkii siyaasided ee 1991kii. Labaatan sanad gudahood bay Oromadu la kulantay niyadjab saamayn ba'an ku yeeshay haybtooda siyaasadeed Itoobiyaan ahaan. 1977kii Mengistu wuxuu shirqool ku dilay Jeneraal Tefere Benti oo noqday hoggaamiyihii Dergiga markii la dilay Aman Andom Eritreeyaan ahaa.
Leenco Lata , oo ahaa Guddoomiye ku xigeenkii OLF, ayaa sanadkii hore ( 2017kii) waraysi dheer siiyay bare-sare Ezekiel Gebissa. Wuxuu xusay in ururka OLF uu soo jeediyay in ay tahay in askarta TPLF aysan keligood noqonin ciidammada qaranka iyo in loo baahan yahay in la dhiso ciidammo ay qowmiyadaha Itoobiya oo dhami u dhan yihiin. Isias Afwerki, oo markaas ahaa hoggaamiyaha uirurkii EPLF, ayaa ku gacan-sayray soo jeedintii OLF. Waxaa xigtay in ciidammadii OLF xero lagu xereeyay si askarta ururka TPLF u nqodaan ciidammada qaranka ee Itoobiya inkastoo ciidammada ururku ka soo jeedaan hal qowmiyad. Lata wuxuu intaas ku daray in xilligaas OLF ay miiska soo saartay laba hindise oo ururku doonayay inay qayb ka noqdaan siyaasadda xilliga kala-guurka: gobannimadoon ( decolonisation) iyo dimuqraadiyadayn ( democratisation). "Kelitalis cusub baa kelitaliskii hore beddelay. Waannu guuldarraysannay militari ahaan hase ahaatee waannu guulaysannay urur ahaan. Waan in dulmiga lagu hayo Oromada uu joogsado ama Itoobiya may sii jireyso." buu yiri Lata. Isku sargo'naan la'aanta tirada Tigreega iyo awooddooda siyaasadeed iyo dhaqaale ayaa u cuntami weysay Oromada. Ka qaybqaadashada geeddi-socodka siyaasadda may u keenin Oromada horumar muuqda oo dhanka siyaasadda ama dhaqaalaha ah. Waan dhibaato siyaasadeed oo Soomaalida Itoobiyaba la degtay.
Lata wuxuu rumeysan yahay inay jiraan xoogag badan oo aan ku faraxsanayn awoodda siyaasadeed ee Oromada. Tusaale ayuu u soo qaatay in dowladaha reer Galbeedku 1991kii u arkayeen Oromada dad Muslimiin ah sidaas darteedna ay dan u arkeen in arrimaha kalaguurka siyaasadda Itoobiya ay kala hadlaan TPLF iyo Jabhadda Xoreynta Dadka Eritreeya ( Eritrean People's Liberation Front) oo waqooyiga Itoobiya ka soo jeeda, Masiixiyiin ah kala-sarrayn hay'adeedna leh ( hierarchy ).
Herman Cohen, oo ahaa diblomaasigii Maraykanka u qaabbilsanaa siyaasaddii kalaguurka Itoobiya, ayaa OLF ku soo xerogaliyay, sida Lata sheegay, halkudhigga: Dimuqraadiyad haddii aysan jirin, iskaashi muu jiro. "Reer Galbeedka, Suudaan iyo EPLF waxay dantooda u arkayneen in OLF ay ka qaybqaadato dowladda cusub ee Itoobiya. Shir London ka dhacay 1991kii, oo jabhadihii hubaysnaa ee Itoobiya ay ku kulmeen, ayuu Lata ku tilmaamay mid EPRDF loogu fududaynayay inay awoodda siyaasadeed hanato. "Ballanqaadyo iyo hanjabaadyo wada socday bay OLF la kulantay" buu yiri Lata.
Casharka Soomaalida Itoobiya ka baran karo ( mar labaad ama mar seddexaad ) xogta Lata la wadaagay bare-sare Gebissa waa: bulsho kala qabysani ama qorshe siyaasadeed aan lahayn waxay u nugushahay fulinta go'aammada shisheeyaha. Waqtiga uu Lata ka hadlayay – 1991kii – Soomaalida Itoobiya may lahayn urur kaalin ku lahaa ridistii taliskii Dergiga.
Dhibta kowaad waxay la xiriirtaa awood-yarida siyaasadeed ee Soomaalida. Oromadu waxay qayb ka tahay isbahaysiga dalka hadda u taliya. Xisbiga Dowlad Deegaanka Soomaaliya Itoobiya muu dhaafsiisna aalad TPLF ku adeegato. Tusaale xasuuqa ba'an oo Soomaalida loo geystay muu aha mid laga hadlayo ama keenay baaqyo ku saabsan baaris. Herman Cohen, oo ka halwgabay Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Maraykanka, wuxuu qoray in dowladda Itoobiya ay aloostay colaadda Soomaalida iyo Oromada dhex taalla hadda. Waa dood ay qabaan dadka u kuurgala arrimaha Itoobiya. Soomaalida Itoobiya looma arko dad xaqooda raadsanaya; waxaa loo arkaa aalad ka mid aaladaha TPLF ay ku seeta-dheeraysanayso. Fashilkan mas'uuliyaddeeda waxaa leh hoggaanka iyo xisbiga DDSI. In xubno ka tirsam DDSI ay isku howlayaan la jaanqaadista isbeddelka Addis Ababa ka dhacay waxay muujinaysaa in weli hoggaamiyeyaasha Soomaalida Itoobiya ay diyaar u yihiin inay aalad cusub u noqdaan Ururka Dimuqraadiga Dadka Oromada (Oromo People's Democratic Organisation), oo uu Ra'iisal Wasaare Abiy Axmed guddoomiye u yahay. Saamayn-badnida siyaasadeed ee OPDO waxay soo muuqatay markii Lemma Megersa, madaxweynaha maamulka Oromiya ahna guddoomiye ku xigeenka OPDO, uu dowladda federaalka ku eedeeyay inay ciidammo federaal gobolka u soo dirtay inkastoo Oromiya aysan codsi u dirin dowladda dhexe. Opride, oo u dooratay Lemma Megersa qofka sanadkii 2017kii, ayaa xustay in Abiy Axmed ka mid yahay kooxda ugu dhow madaxweynaha dowlad deegaanka Oromada iyo inuu Abiy Axmed lafdhabar u ahaa dadaalladii lagaga dhigayay idaacadda Oromiya mid barnaamijyadeedu aysan ku koobnayn baahinta waraka ku saabsan horumarinta balse noqotay idaacad u guntatay soo bandhigista musuqmaasuqa madaxda dowladda dhexe.
Cabdi Maxamuud Cumar , madaxweynihii hore ee DDSI, wuxuu xoogga saaray kasbashada kalsoonida kaadiriinta sarsare ee TPLF .Wuxuu gaaray heer uu illoobo gaboodfalka milishiiyada Oromada, Qeerroo, kula kaceen Soomaali badan. Wuxuu doorbiday inuu u doodo dadka Tigreega oo gobolka Amxaarada lagu dhibaateeyay. Wuxuu u qareemiddaas danaysiga siyaasadeed ku salaysan ku mutaystay in Tigrai Online ay Cabdi Iley u dooratay Qofkii Sanadkii 2016kii. Markii Abiy Axmed noqday Ra'iisal Wasaaraha Itoobiya TPLF way ka badaabdin waysay Cabdi Maxamuud Cumar in lagu qabso qirasho gaboodfal iyo, markii dambe, iscasilaad.
Dhoodaan oo iftiiminayay tuducyada kor ku xusan wuxuu sheegay in karti-laawe uu dadka la soo hor istaagi karo "Anigoo reer hebel ah baa talada leh"! "Haddii qoys uu ka fiirsado qofka wiil u gardaadin doona ( bannaan-bixinaya) maxay bulsho uga fiirsan la'dahay qofka hoggaamin doona ?" bay doodda Dhoodaan ahayd welina tahay.